Weedhaha Milton Friedman: Weedhaha ugu fiican, waa kuma kan iyo maxay tahay aragtidiisa | Dhaqaalaha Dhaqaalaha
Casudi casals | 30/06/2021 09:00 | Dhaqaalaha guud
Waxaa jira dhaqaaleyahanno badan oo caan ah oo nagu dhiirrigalin kara xikmadooda iyo waaya-aragnimadooda, tusaale ahaan, iyagoo adeegsanaya weedho waaweyn oo Milton Friedman ah. Mareykankan wuxuu ku guuleystay sumcad muhiim ah qeybtii labaad ee qarnigii XNUMX-aad. Waxay ahayd markaa ka dib inuu ka mid noqday hoggaamiyeyaasha naqdiya aragtiyaha dhaqaale ee la xiriira John Maynard Keynes. Wuxuu ku sifeeyey qaab dhaqaale oo isku dhafan oo noqdey mid caado u ah dalal badan oo horumarey xilligii dagaalkii labaad ee aduunka.
Muhiimadda iyo saamaynta uu xilligaas lahaa Friedman dartiis, waxaan qormadan ugu hibayn doonnaa isaga. Wax yar ayaan ka hadli doonaa taariikh nololeedkiisa iyo aragtidiisa, laakiin waxaan si gaar ah u iftiimin doonnaa weedhihii Milton Friedman.
1 12ka weedhood ee ugu fiican Milton Friedman
2 Waa kuma Friedman?
2.1 Waa maxay aragtida Milton Friedman?
12ka weedhood ee ugu fiican Milton Friedman
Friedman ayaa lagu tilmaamay The Economist sida "Dhaqaaleyahankii ugu saameynta badnaa qeybtii labaad ee qarnigii XNUMX-aad" iyo "nin weyn oo dhaqaaleyahannada ka mid ah." Sababtaas awgeed, weedhaha Milton Friedman lama khasaarin. Waxaa lagugula talinayaa inaad aqriso si loo dhiiri geliyo fekerkeena muhiimka ah:
Inta badan doodaha ka dhanka ah suuqa xorta ah waxay salka ku hayaan kalsooni daro xaga xoriyada lafteeda ah. "
Waxaan taageersanahay sharciyeynta daroogada. Marka loo eego nidaamkayga qiimaha, haddii dadku rabaan inay is dilaan, waxay xaq u leeyihiin inay sidaa sameeyaan. Dhibaatooyinka ugu badan ee ka yimaada daroogada waa sababta oo ah waa sharci darro. "
Marka laga reebo qaar, ganacsatadu waxay doorbidayaan suuqa xorta ah, laakiin way diidan yihiin markay timaado ganacsigooda. "
"Waa dhibaato anshaxeed in dowladdu ay isku beddelayso dambiilayaal laga yaabo inay ku kacaan wax aan adiga iyo annagu raalli ka ahayn, laakiin waa wax aan cid kale wax u dhimayn."
"Mid ka mid ah qaladaadka waa weyn waa in lagu xukumo siyaasadaha iyo barnaamijyada ujeedooyinkooda halkii laga qiimeyn lahaa natiijooyinkooda."
"Waa inaad si cad u kala garataa inaad suuq u hiiliso iyo inaad shirkad taageerto."
Bulshada ay sinnaanta ka hormariso xorriyadda midkoodna ma lahaan doono. Bulshada ka hormarinaysa xorriyadda sinnaanta waxay heli doontaa qiyaas ballaaran oo labadaba ah.
Dowladaha waligood wax ma bartaan; dadka uun baa wax barta.
“Waa inaan garwaaqsanno inaynaan ka fileynin utopia aan la gaari karin. Waxaan jeclaan lahaa inaan arko waxqabadka dowladda oo aad uga yar kan aan hadda heysano, laakiin uma maleynayo inaan lahaan karno xaalad aanan u baahneyn dowladnimo haba yaraatee.
«Fadliga weyn ee nidaamka suuqa xorta ahi waa in suuqa uusan dan ka lahayn midabka dadka; dan kama gelin waxa ay tahay diintiisa; waxaad kaliya danaynaysaa haddii aad soo saari karto wax aad rabto. Waa nidaamka ugu waxtarka badan ee aan daah-furnay si loogu oggolaado dadka is neceb inay iskaashadaan oo ay is caawiyaan.
'Doodda mamnuuca daroogada ayaa ah mid xoogan oo daciif ah sida dooda mamnuuca cunida. Dhamaanteen waan ognahay in xad-dhaafka ahi uu keeno dhimasho ka badan daroogada.
«Waxaa jira afar siyood oo lacag lagu kharash gareeyo: Waxaad ku bixin kartaa lacagtaada, naftaada. Markaad adigu naftaada ku qarash gareyso naftaada, aad ayaad uga taxaddaraysaa waxaad ku bixineyso, waxaadna hubineysaa inaad ku hesho inta ugu badan dollar kasta. Waxaad ku qarashgareyn kartaa lacagtaada, dadka kale. Tusaale ahaan, waxaan hadiyad ugu iibsadaa qof. Markaad sidan sameyso, waxaad ka taxaddartaa inaadan wax badan qarashgareynin, laakiin kama aad walwalin waxyaabaha ku jira hadiyadda sidoo kale. Waxaad ku bixin kartaa qof kale lacagtiisa, naftaada. Hagaag, hadaad qarashgareyso lacagta qof kale, markaa waxaad hubineysaa inaad heysato cunno fiican. Ugu dambeyntii, waxaad ku bixin kartaa qof kale lacagtiisa, qof kale. Hadana haddii aan ku isticmaali karo lacagta dadka kale qof kale, markaa dan kama lihi inta lacag ah ee aan bixiyo ama waxa aan iibsado. Taasina waa waxa ay dowladdu qabato oo u taagan qiyaastii 40% dakhliga qaranka ”.
Waa kuma Friedman?
Hadda oo aan ognahay laba iyo tobanka weedhood ee ugu wanaagsan Milton Friedman, aan wax yar ka hadalno ninkani muxuu ahaa. Wuxuu ku dhashay 1912 magaalada Brooklyn. Qoyskiisa Yuhuudda ah waxay lahaayeen ilo dhaqaale, laakiin sidaas oo ay tahay, Friedman wuxuu ku guuleystey inuu heer sare ka gaaro tacliinta isagoo da 'yar oo uu ka qalinjabiyey dugsiga sare isagoo jira 16 sano oo keliya. Markii dambe, wuxuu ka qayb galay casharro xisaabta iyo dhaqaalaha ee Jaamacadda Rutgers. Wuxuu waxbarashadiisa ku dhammeeyay mastarka cilmiga dhaqaalaha ee Jaamacadda Chicago. Kadib 30 sano oo waxbarid ah, wuxuu kudhamaaday howlgab 1977.
Milton Friedman wuxuu helay abaalmarinta Nobel Prize oo uu ku darsaday dhaqaalaha. Xitaa ka dib markii uu howlgab noqday, dhaqaaleyahankan weyn wuxuu sii waday inuu la hadlo oo si cad wax u qoro ilaa uu ka gudbayo 2006.
Waa maxay aragtida Milton Friedman?
Waa in la ogaadaa in Milton Friedman uu ahaa aasaasihii waxa loogu yeero aragtida monetarist. Waa aragti ku saleysan oo xoogagga suuqa xorta ahi, guud ahaan, ka waxtar badan yihiin faragelin kasta oo dadweyne oo lagu dhiirrigelinayo kobaca dhaqaale ee xasilloon oo aan lahayn cadaadis sicir barar.
Waxaan rajeynayaa in xigashooyinka waa weyn ee Milton Friedman ay ku dhiiro geliyeen oo kaa caawiyeen inaad hesho aragti cusub. Ogaanshaha dhaqaaleyahannada waaweyn, fikirradooda iyo qaababkoodaba marwalba waa ikhtiyaar wanaagsan oo wax lagu barto laguna koriyo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Dhaqaalaha Dhaqaalaha » Dhaqaalaha guud » Xigashooyinka Milton Friedman
Waa maxay Sharciga Shaqaalaha